मोटर साइकल भि’र बाट ख’स्दा आफ्नी यति राम्ररी श्रीमति र बच्चालाई छोडेर सधैंका लागि अ’स्ताए शिवहरी ! Uncategorized - dautarimedia.com
मोटर साइकल भि’र बाट ख’स्दा आफ्नी यति राम्ररी श्रीमति र बच्चालाई छोडेर सधैंका लागि अ’स्ताए शिवहरी ! Uncategorized
मोटरसाइकल भीरबाट खस्दा पोखराका एक युवाको ज्या’न गएको छ । शुक्रबार दिउसो सवा एक बजे मुस्ताङको थासाङ गाँउपालिका ४ काभ्रेभीरमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई भीरबाट खस्दा मोटरसाइकल चालकको मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ** थप अन्य समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
मोटर साइकल भि’र बाट ख’स्दा आफ्नी यति राम्ररी श्रीमति र बच्चालाई छोडेर सधैंका लागि अ’स्ताए शिवहरी ! मोटरसाइकल भीरबाट खस्दा पोखराका एक युवाको ज्या’न गएको छ । शुक्रबार दिउसो सवा एक बजे मुस्ताङको थासाङ गाँउपालिका ४ काभ्रेभीरमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई भीरबाट खस्दा मोटरसाइकल चालकको मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ** थप अन्य समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
< मोटर साइकल भि’र बाट ख’स्दा आफ्नी यति राम्ररी श्रीमति र बच्चालाई छोडेर सधैंका लागि अ’स्ताए शिवहरी ! मोटरसाइकल भीरबाट खस्दा पोखराका एक युवाको ज्या’न गएको छ । शुक्रबार दिउसो सवा एक बजे मुस्ताङको थासाङ गाँउपालिका ४ काभ्रेभीरमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई भीरबाट खस्दा मोटरसाइकल चालकको मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Previous: संसद भवनमा निर्माणका सामाग्री बोकेको टिपरसँग स्कुटी ठोक्कियो, बुढाथोकीको निधन
Next: आइटम स्टार’ नोराको बोल्ड फोटोसुटले बलिउडमा तहल्का, हेरौ हट तस्बिरहरू